मन्डपबाटै छोरा भा’गेपछि हुनेवाली बुहारीसंग ससुराकै भयो बिबाहमा ! – PathivaraOnline
Home > समाज > मन्डपबाटै छोरा भा’गेपछि हुनेवाली बुहारीसंग ससुराकै भयो बिबाहमा !
admin September 10, 2020 September 10, 2020 समाज	0
एजेन्सी । भारतको बिहारमा एउटा अच’म्म लाग्दो बिबाहको घ’टना भएको छ।बिहार स्थित ६५ बर्सिय रोसन लालको बिबाह २१ बर्षिया कन्यासंग हुन उनका छोराले नै बाध्य पारेका छन्। बासतबमा कुरा के रहिछ भने, रोसन लालको छोराको बिबाह सपना नामकी कन्या संग हुनेवाला थियो । बिबाहको दिनमा जन्ती कन्याको घरको ढोकामै पुगेको थियो तर रोसनको छोरा मन्डपबाट एकाएक भा’गे।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा शशांक कोइरालामा संक्र’मण पुष्टि भएको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले आफूमा सं’क्रमण देखेको बताएका हुन्। आफू लक्षण बिहिन रहेको भन्दै कोइरालाले चिकित्सकहरुको सल्लाह अनुसार हाल होम आइसोलेसनमा बसिरहेको बताएका छन्।
कोइरालाको ह्याम्स अस्पतालमा को’भिड-१९ परीक्षण गरिएको थियो। ह्याम्सले प्रस्ट रिपोर्ट दिन नसकेपछि उनको स्वाब टेकुस्थित शहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पुनः परिक्षणका लागि पठाइएको थियो।कोइराला फेसबुकमा आफूलाई कुनै स्वास्थ्य समस्य नरहेको बताए पनि उनी निकट काँग्रेस नेताले भने उनी बि’रामी परेको बताएका छन्।
केही दिनबाट ज्वरोले थला परेपछि उनको स्वाब लिइएको ती नेताले बताए। कोइरालाले आफूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएकाहरुलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन्।
बेरूतकाे बन्दरगाहमा नजिकै यस्तो ड’रलाग्दो भि’षण आ’गला’गी
काठमाडौं उपत्यका आउदै हुनुहुन्छ? यी चीज साथमै राख्नुहाेला है…
पहिले पैसा लिएर होटलमा यौ’नम्बन्ध राख्थिन्, जब काम सकिन्थ्यो त्यसपछि यस्तो…